Ezona wallpapers zasezintabeni zeMac | Ndisuka kuMac
Lo mfanekiso uya kuvakala uqhelekile kuwe. Eli liphepha lodonga elakhethwa nguApple kuguqulelo lweMacOS Mojave. Luphawu oluhle lwezinto ezisilindeleyo kweli nqaku apho unokufumana okuninzi iintaba ezintle wallpapers. Ngelixa kuyinyani ukuba lo mfanekiso ungowasentlango yeMojave kwaye ziindunduma, awuyi kundixelela ukuba ayinakumela ngokugqibeleleyo, kuba indikhumbuza intaba. Ndiyathemba ukuba uyawonwabela umxholo kakhulu kwaye ukhumbule ukuba ujonge iphepha lodonga elilungileyo, uhlala unamanqaku ambalwa adlulileyo apho unokufumana khona 50 imvelaphi engcono okanye ubaleke ungene ezinye zezi lwandle.
Sinokuqala ngezinye zeemali ezenziwa yi-Apple ebesebenzisa kwiindlela zabo zokusebenza. Abanye babo baneentaba njengabalinganiswa. Okulandelayo sikushiya leya yayisetyenziselwe iMacOS El Capitan. Njengoko unokubona kwimvelaphi apho, nangona i-protagonist ingekho kuphela iintaba, sinokuyixabisa kwaye sinokubona ubungangamsha babo. Ngesibhakabhaka esineenkwenkwezi, siyakumema ukuba uchithe ubusuku apho ucinga ubukhulu bendalo kwaye usikhumbuza ukuba sincinci kangakanani.
Enye inguqulelo eyasetyenziswa nguApple kwiwallpaper ye macOS El Capitan Yeyona sikushiyayo ngokulandelayo. Sihamba ubusuku nemini kodwa ngobuhle obufanayo. Ngeli xesha sinomfanekiso wentaba ebonakala ingenakwenzeka ukunyuka ngenxa yokuma kwayo kwaye inika i-Mac yethu i-touch yokungafi.Ngaloo ntaba ebonakala ilawula yonke into kwaye ibonakala ngathi ibe nathi ukususela ekuqaleni kweentsuku. Yeyiphi indlela, ukuba ubungazi, ndicinga njalo, i-El Capitan yintaba ebekwe kwipaki yendalo yaseYosemite, elinye igama elikhethelwe enye yeenkqubo zokusebenza ze-Apple oza kuzifumana ngezantsi.
Emva koko sikushiyela imvelaphi eyasetyenziswa nguApple kuguqulelo lwayo Mac Sierra. Iintaba ezinekhephu ezinelanga elibetha kancinane kuzo. Ndizama ukwazi ukuba kuphuma ilanga okanye kukutshona kwelanga. Ndibheja kowokugqibela, kodwa kunzima ukuxelela ngodubulo olusondeleyo. Lo ugxile kwiintaba kwaye ndikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba yimpumelelo epheleleyo.
Ngokufana nomntakwabo omncinci, ngoko kuthetha, emazantsi i-MacOS High Sierra ikwajolise nakwiintaba. Kodwa ngeli xesha sinomfanekiso ovuleke ngakumbi, oquka izinto ezininzi kwimephu.Sinechibi, imithi emininzi kunye neentaba. Kubonakala ngathi likhephu lokuqala eliqala ukuwa ekwindla kuloo ndawo. Imibala engakholelekiyo kulo mfanekiso oqhelekileyo welona xesha le-photogenic kubo bonke. Iwallpaper ekufanele ukuba yonwabe ngalo lonke ixesha ibekwe kwiMac.
Ngoku sinayo kunye nathi inguqulelo ye macOS Yosemite. Ngembeko yepaki yendalo ekwimpuma yeSan Francisco, eCalifornia, eUnited States. Yathiywa igama leNdawo yeLifa leMveli yiUNESCO ngo-1984 kwaye yayiyipaki yokuqala eyalungiselelwa ngurhulumente waseUnited States. Ngendlela, ukuba uyathanda ukufota uya kwazi ukuba omnye wootata beefoto zanamhlanje, uAnsel Adams, wafota ipaki izihlandlo ezininzi. Bafanelekile ukubona imifanekiso yakho. Enyanisweni ndizakushiya isibini kubo kwesi sithuba kuba nangona bemnyama namhlophe, uya kubona amandla abanawo kwaye ngokuqinisekileyo ubunyani babo. Akukho lutshintsho lwekhompyuter, luphuhla kuphela kwigumbi elimnyama elinobugcisa obugqibeleleyo.
Yosemite nguAnsel Adams. Gcina ingqondo yakho ivulekile kwaye ungacingi ukuba ukuba mnyama namhlophe akumangalisi. Uya kuyithanda inguqulelo yakhe ye-El Capitan. Ukuba uhlalutya umfanekiso kakuhle, uya kubona indlela yokusebenzisa ikhamera enobuchwephesha obungaphantsi kakhulu kunabo bangoku, yakwazi ukubamba zonke izibane kunye nezithunzi zentlambo. Ngaphaya koko, akukho ipixel enye yomfanekiso engenalo ulwazi. Yonke into ineenkcukacha zayo, kwanesona sithunzi sinzulu. Kuyamangalisa ukubona umfanekiso.
Ukunikezelwa kwemifanekiso i-Apple isebenzise iintaba kwiinkqubo zayo zokusebenza, siya kudlulela kolunye ukhetho lwamaphephadonga ukuba sinokusebenzisa iiMacs zethu.
Siqala ngephepha lodonga, nangona lingeyonyani, alikho ngaphantsi komtsalane kwaye liya kujongeka lihle njengephepha lodonga lekhompyuter yethu. Igcwele iintaba ezizii-protagonists zesi sithuba sebhlog, sinayo yonke into enokuthi iqokelele imvelaphi yedesktop elungileyo. Ubuhle, amandla kwaye ngaphezu kwazo zonke izithuba ukuze ii-icon zethu zeenkqubo okanye iifayile esizisebenzisa yonke imihla zibonakale ngaphandle kweengxaki. I-landscape leyo Akwaba bendibona qho kusasa xa uvula amehlo akho.
Ngemvelaphi elandelayo okanye umfanekiso weMac yakho, uya kufuna ukuyivala kwaye uhambe kuhambo. Ngaba indawo emangalisayo kwaye ndiqinisekile ukuba uya kusebenzisa ukubona ukuba ijongeka njani njengemvelaphi. Sele ndikuxelela ukuba iyamangalisa kwaye yenye yezo zikhethwe ndim, ngakumbi ngala maxesha onyaka apho iiholide zisondela. Kuyandikhuthaza ukuba ndibe nenjongo yokuphuma kwi-monotony kwaye ndifune ukukhangela enye into. Lo mhlaba uyandihambisa kwaye undikhokelela kulonwabo olupheleleyo.
Bendizibuza ukuba ndingawufaka na lo mfanekiso ulandelayo. Kodwa kufuneka ndiyenze. Ukuba sinenguqulelo yentaba ye-El Capitan njengemvelaphi ye-macOS kwaye sinenguqulelo ye-Ansel Adams enkulu, kutheni ungenayo inguqulelo yentaba phakathi ebusika? Kufuneka kubekwe, sijongene nomfanekiso osibonisa intlambo kunye nabo bonke ubuhle kunye nobunzima bexesha lasebusika.
Iiwallpaper ezimbini ezilandelayo zivela, mhlawumbi i iintaba ezintathu ezidumileyo kwiplanethi. Ubuncinci ezintathu kwezona zidumileyo. Eyokuqala kubo yiNtaba iFuji. Eyona ncopho iphakamileyo kwisiqithi saseHonshu nakuyo yonke iJapan, enemitha engama-3776 yokuphakama. Ime phakathi kweShizuoka kunye neYamanashi prefectures kumbindi weJapan nakwintshona yeTokyo. Eyesibini ihambelana neyona ntaba iphakamileyo ehlabathini. I-Everest, enomphakamo weemitha ezingama-8848, ekwilizwekazi laseAsia, kwi-Himalayas, ngakumbi kudederhu lweentaba zeMalangur Himal. Ekugqibeleni le kum yenye yezona ntaba zintle ezikhoyo. I-matterhorn. Ifumaneka kwiiAlps, enqumla eSwitzerland nase-Itali. Incopho enkulu, ephantse yalingene yephiramidi encopho yayo iziimitha ezingama-4.478.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ezona wallpapers zibalaseleyo zeentaba zeMac
I-Dropbox iqala uvavanyo lwesicelo sayo esihambelana ne-Apple Silicon